Brazila: Asehon’Ireo Olom-Pirenena Tsotra Manao Gazety Ireo Asa Vaventy Tsy Vita Ao An-Tanàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2013 14:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Magyar, English, English
[Ny rohy rehetra dia mitondra amin'ny pejy Teny Paortogezy afa-tsy izay voalaza mifanohitra amin'izany.]
Nabaribarin'ireo olom-pirenena Mpanao gazety manao fanadihadihana ao aminà tanàna kely ao Brazila ny tsifahombiazan'ny governemanta ao an-toerana, izay notsinotsinoavin'ireo Mpanao gazety vaventy ao amin'ny firenena, fa nopotehan'ny fandovàna fanaovana hatsirambina ny raharaham-panjakana sy ny tsy fandraisana andraikitra izany ka tsy hahafahana mamita ireo tetikasam-panjakana ara-potoana.
Ny Tetikasa Amigos de Januária [Naman'ny Januária], tamin'ny taona 2011 tao amin'ny Rising Voices grantee [en], dia niasa mba itazonana ny governemantan'ny Januária [en], tanàna misy mponina miisa 65,000 any amin'ny faritra Avaratry ny Fanjakana Minas Gerais ao Brazila, izay tonga ho olom-banona nanomboka ny taona 2004. Nitatitra ireo tetikasa isan-karazany vao haingana izay atao ao an-tanànany ny Fikambanan'ireo Mpanao gazety olom-pirenena niaraka tamin'ny Maire voafidy farany sy ireo solontenam-panjakana maro ao an-toerana izay namita ny asany ny 1 Janoary 2013, ao anatin'izany ny fananganana tranoben'ny fanatanjahantena, ny fanarenana ny làlana, ary ny fanamboarana ireo sisin-drano. Nanomboka ny taona 2012 ny asa ary ny volana May tamin'iny taona iny ihany no tokony hifarana izany nefa nilaozan'ireo tompon'andraiki-panjakana tsy nisy fahavitana akory izany .
Fanorenana Tranoben'ny Fanatanjahantena ao Januária. Sary avy @ Amigos de Januária, fahazon-dalana avy @ Creative Commons.
Tamin'ny Desambra lasa teo, andro vitsivitsy talohan'ny nipetrahan'ireo mpitantana vaovao ny tanàna, nisafo ilay tranoben'ny fanatanjahantena tao amin'ny faritra Novo Milênio ny ao amin'ny tetikasa ary nilaza:
Ny Governemanta Federaly no mamatsy ny asa ka mitentina eo amin'ny 437.022,25 reais [eo ho eo amin'ny 221.390 US dollars]. Ny zava-nitranga dia toy izao: ny taratasy fahazoan-dàlana amin'ny fanaovana ny asa dia manambara fe-potoana ao anatin'ny 180 andro, saingy tsy nisy daty mazava ny fanombohana ny asa, ka mitarika fahasarotana ho an'ny mponina amin'ny fanaraha-maso ny asa sy ny fotoana farany handraisana ny zava-bita izany.
Nampanantena ireo mambra ao anatin'ilay Tetikasa fa hihazona ireo izay tafatsangana tamin'ilay tranoben'ny fanatanjahantena, mba handrisihana “ireo olom-boafidim-panjakana vaovao hanohy ny asa ny taona 2013″.
Asa tsy vita najanona eo amin'ny fihaonan-dalana Leão XIII sy Brasil Avenue mandritra ny fotoan'ny oram-pahavaratra. Sary avy amin'i Wellington Silva, mpamaky, navoakan'i Amigos de Januária.
Efa dila avokoa ny fe-potoana tokony nanamboarana ny sisin-tanàna sy ireo làlana maro, ary navelan'ireo olom-boafidim-panjakana teo aloha ho tsy vita ny asa. Ny lahatsoratr'ilay Fikambanana dia nizara ny ahiahiny amin'ny fampiasana mihoampampana ny hetram-bahoaka sady nitatitra ny loza mananontanona ny mponina indrindra mandritra ny fotoanan'ny orana.
Ho fankalazana ny faha-152 taona hatramin'ny nanorenana ny Januária, nanomboka nanao ny asa ny governemanta teo an-toerana mba hamelomana indray ny sisin-tanàna ny 13 Desambra 2011, ka novinavinaina ho ny 8 May 2012 ny famaranana ny asa. Kanefa, tsy vita ara-potoana izany sisin-tanàna izany. Ary satria fantatra fa manaraka ny reniranon'i São Francisco [en] no misy ny tanàna, dia anisan'ireo manana ny toerany lehibe amin'ny fisintonana mpizahatany ny sisin-drano.
Efa nahazo vy fitazonana ho fiarovana mihazo ny sisin-drano amin'izao fotoana izao ilay Fisintonana mpizahatany ao an-tanàna, seza vita amin'ny hazo tsotra ary vato fisaka mitovy tàntana handehanan'ireo Jamba. Kanefa, vao ny ampahany amin'ilay tetikasa ihany no vita tanteraka, ny ampahany betsaka amin'ireo làlan'ny mpandeha an-tongotra no tsy vita vato ary ireo fitaovana manazava ny làlana izay efa natao dokam-barotra aza toa mbola tsy mipetaka na tsy voavoatra akory.
Sisin-dranon'i Januária. Sary avy @ Amigos de Januária, nampiasa amin'ny alalan'ny fahazon-dalana CC .
Ny làlana Getúlio Vargas no iray amin'ireo asa vitsivitsy efa vita.
Vita tanteraka ireo asa ao amin'ny Lalana Vargas ao an-tananan'i Januária, Fanjakan'i Minas Gerais, ao Brazila. Sary avy amin'ny Amigos de Januária, lisansa Creative Commons.
Mampatsiahy indray ireo asa tsy vitan'ny teo aloha tsy maintsy lovain'ireo mpitondra vaovao ireto asam-bahoaka tsy vita eran'ny tanàna ireto. Ao ambadik'ireo tetikasa fananganana mikatso ireo, dia tsy maintsy mitady vahaolana ara-bola mikasika izao fahavoazana izao ilay governemanta vaovao alohan'ny hamindrana ny fahefana – tara ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana ho an'ny volana Desambra, ary tsy nisy akory ny vinavina natolotra ho an'ny volana Janoary. Nitatitra ny Amigos de Januária fa mbola tsy voaloa ihany ireo karama tany am-piandohan'ny volana Febroary.
Tsy tranga manokana ao Brazila anefa izany ao Januária izany. Ny tsy fandoavana ny volan'ireo mpiasam-panjakana sy ny toetry ny asam-panjakana tsy vita no mamaritra ny toetra marefon'ny fanomezan-toky ataon'ny mpanao politika ao amin'ny tanàna. Matetika dia miha-betsaka ny olana mikasika ny foto-drafitrasa mijoro sy ny raharaha mifandraika amin'izany mandritra ny fotoanan'ny tetezamita ara-politika, ka miantraika any amin'ny fiainan'ny mponina. Ireo mambra ao amin'ilay tetikasa Amigos de Januária dia efa an-dàlam-pandinihana ireo olana ireo mba hampandeha hatrany ny raharaha ao an-tanàny.